28 October 2019 - 18:15 By MacDonald Dzirutwe
Air Zimbabwe's sole aircraft in operation was grounded last week by ACSA. File photo.
Zimbabwe's national airline has resumed flights to South Africa, the company said on Monday, after a halt last week when Airports Company South Africa (ACSA) barred the airline from using the country's airports over unpaid fees.
Air Zimbabwe's sole aircraft in operation was grounded last week by ACSA, which said the airline had failed to pay landing and parking fees, passenger service charges and an undisclosed amount towards clearing its arrears.
Air Zimbabwe owes foreign and domestic creditors more than $300m (R4.3bn). The Zimbabwe government put the airline under administration last year and later invited bids from potential investors as it seeks to privatise it.
Air Zimbabwe's only operational plane impounded at OR Tambo airport over debt
The Airports Company of South Africa has impounded an aircraft owned by Air Zimbabwe over debt.
South African Airways (SAA) said on Thursday evening its flight schedule had returned to normal after several of its aircraft underwent a compliance ...